Caddị Mpempe akwụkwọ Cascading | Martech Zone
Satọde, Satọdee 9, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
M mere gafee nnukwu post taa na Attackr.com nke kwuru banyere nhicha CSS gị. Cascading Style Ibé akwụkwọ bụ ihe ịrịba uru ka optimizing na emebe gị na ebe nrụọrụ weebụ n'ihi na ọ na-ekewa visual oyi akwa nke gị na saịtị ahụ si n'ezie HTML ma ọ bụ koodu n'azụ gị na saịtị. A nchọgharị na-agụ akwụkwọ ịke nchọgharị, otú ahụ ka m n'aka na e nwere nnukwu uru n'ihi na elu-okporo ụzọ weebụsaịtị, ebe nhazi niile visuals gị na peeji nke na-ekpe ka ihe nchọgharị kama nke ihe nkesa.
CSS na-enyekwa gị ohere ịme mgbanwe anya 'na ofufe' na saịtị gị na-enweghị ịgbanwe HTML ma ọ bụ faịlụ azụ gị. Yabụ… ịgbanwe njirimara ọrụ gị anaghị achọ iwugharị ngwa gị, ị na - etinye faịlụ CSS ọhụrụ. CSS 2 ọbụna na-ewe ya nzọụkwụ ọzọ… na-enye ọtụtụ ndị ọzọ visual nkwalite, gụnyere n'ezie ederede ederede.
Ngwá ọrụ m ji rụọ ọrụ taa bụ CSSTidy. M ebudatara ụdị ngwa ahụ, nke nwere interface-iwu. Ọ bụghị naanị belata oke faịlụ m, ọ haziri mpempe akwụkwọ m iji mee ka ọ dị mfe ọgụgụ. Ọ bụ ezigbo ngwa ngwa! Nakwa, enwere ụdị ntanetị ugbu a ma ọ bụrụ na ịchọghị ibudata ngwa.
CSSTidy si CSS Cheatsheet
Zen nke imewe CSS - akwukwo dabere na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama Ogige CSS Zen.
StyleMaster - site na WestCiv, nke a bu ezigbo ederede CSS. The website nwere ụfọdụ oké Atụmatụ nakwa!
W3School na CSS
Biko tinyekwa akụrụngwa gị! Enwere m mmasị karịsịa n'ọganihu CSS, yana nkwado nchọgharị. Amaara m na Firefox na-akwado CSS2, mana anụbeghị m ọtụtụ ihe na nkwado IE7 maka CSS2.
Sep 24, 2006 na 10:37 PM
Achọtara m nnukwu ntinye ọzọ De blọgụ Pro na CSS njikarịcha.